Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विश्वकप फुटबलमा नयाँ महारथी उदय हुने सम्भावना – Emountain TV
विश्वकप फुटबलमा नयाँ महारथी उदय हुने सम्भावना
एजेन्सी, २८ असार । क्रोएसियाले रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि फ्रान्ससँगको भेट पक्का गरेको छ । बुधबार राति भएको सेमिफाइनल खेलमा पूर्व्विजेता इङ्ल्यान्डलाई २–१ गोलले परणजित गर्दै क्रोयशिया फाइनलमा पुगेको हो ।
यसअघि बेल्जियमलाई पराजित गर्दै फ्रान्स फाइनलमा पुगिसकेको छ । क्रोएसियाले आईतबार उपाधिका लागि पुर्व विजेता फ्रान्ससँग खेल्ने छ । क्रोएसियाको जितमा मारियो मान्जुकिचले अतिरिक्त समयमा निर्णायक गोल गरे ।
१०९ औं मिनेटमा मान्जुकिचले गरेको गोलमा क्रोएसियाले ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो । क्रोएसिया विश्वकपमा पहिलोपटक फाइनल पुगेको हो । सन् १९९० मा युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएयता क्रोएसिया यसअघि सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो ।
क्रोएसिया अन्तिमपटक सन् १९९८ को विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । इङ्ल्यान्डविरुद्ध सुरुवाती अग्रता लिन असफल क्रोएसियाले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो । युभेन्ट्सका ३२ वर्षीय स्ट्राइकर मान्जुकिचले इभान पेरिसिचको पासमा गोल गरेका थिए ।
यसअघि निर्धारित ९० मिनेटको खेल १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो । क्रोएसियाका इभान पेरिसिचले ६८ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । २९ वर्षीय मिडफिल्डर पेरिसिचले लामो क्रसमा आएको बललाई सिक्स यार्ड सर्कलबाट गोलपोष्टको दिशा दिएका थिए ।
खेलको सुरुवातमै इङ्ल्यान्डले अग्रता लिएको थियो । पाँचौं मिनेटमा कायरन ट्रिपियरले फ्रिकिक गोल गरे । डिबक्सबाहिरबाट उनले गरेको गोल साइड बार च्यापेर गोल भएको थियो । २७ वर्षीय डिफेन्डर ट्रिपियरको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल थियाे । ५२ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा पुग्ने इङ्ल्यान्डको सपना यही सकिएको छ ।